शिवलि’ङ्गलाई किन पुजा आजा गरी मान्छन ? यस्ता छन कारण…. - Kohalpur Trends
शिवलि’ङ्गलाई किन पुजा आजा गरी मान्छन ? यस्ता छन कारण….
परापूर्व काल देखी अहिले सम्म शिवलि’ङ्गलाई किन पुजा आजा गरी मान्छन रु किन के का लागि पुजा गर्छन । अन्य धर्मका मानिसहरु आफ्ना साना—साना बच्चालाई भन्छन् कि हिन्दुहरु लिं’गलाई पुजा गर्छन् । सबैलाई संस्कृतको ज्ञान पनि हुँदैंन । आउनुस् यसको अर्थ जान्नुस् र भ्रमबाट बच्नुहोस्ः लिं’गको अर्थ संस्कृतमा चिन्ह, प्रतीक हुन्छ ।शिवलिंगको अर्थ शिवको प्रतीक भन्ने हुन्छ । पुरुष लिं’गको अर्थ पुरुषको प्रतीक भन्ने हुन्छ । यसैगरी स्त्रीलिंगको अर्थ स्त्रीको प्रतीक भन्ने हुन्छ । र न’पुसंक लिं’गको अर्थ न’पुसंकको प्रतीक भन्ने हुन्छ ।
आखिर के हो त शिवलिं’ग रु शुन्य, आकाश, अनन्त, ब्रह्माण्ड र निराकार परमपुरुष भएकाले यसलाई लिंग भनिएको हो । स्कन्दपुराणमा आकाश स्वयंम लिंग हो भनिएको छ । शिवलिं’ग वातावरणसहित घुमिरहेको धर्ति तथा सारा अनन्त ब्रह्माण्डको अक्ष धुरी नै लिंग हो । शिवलिं’गको अर्थ अनन्त हुन्छ । अर्थात यसको कुनै सुरुवात पनि हुन्न र अन्त पनि । शिवलिं’गको अर्थ लिं’ग वा यो’नी होइन । वास्तवममा यस्तो ब्याख्या दिगभ्रमित गर्नका लागि अंग्रेजहरुले गरेका हुन् । हामीलाई नै थाहा छ, एउटा शब्दलाई भिन्न—भिन्न भाषामा अलग—अलग अर्थ निकाल्न सकिन्छ । त्यसैले शिवलिं’गको अभिप्राय चिन्ह, निशानी, गुण, ब्यवहार वा प्रतीक हो । धर्ती यसको पिठ्यु र आधार हो ।
त्यसैले अनन्त शुन्यबाट पैदा हुन्छ, त्यसैमा लय हुनाका कारण यसलाई लिं’ग तथा अन्य विभिन्न नामबाट समेत सम्बोधन गरिएको हो । जस्तोः प्रकाश स्तम्भरलिं’ग, अ’ग्नी स्तम्भरलिं’ग, उर्जा स्तम्भरलिं’ग आदि । ब्रह्माण्डमा दुई चीज छन् उर्जा र पदार्थ । हाम्रो शरीर पदार्थबाट निर्मित हुन्छ भने आत्मा उर्जा हो । यसै प्रकारले शिव पदार्थ र शक्ति उर्जाको प्रतीक बनेर शिवलिं’गका रुपमा चिनिन्छ । ब्रह्माण्डमा उपस्थित सबै ठोस तथा उर्जा शिवलिं’गमा निहित हुन्छ । वास्तवममा शिवलिं’ग हाम्रो ब्रह्माण्डको आकृति हो ।
किन शिब लिं’ग को पूजा गरीन्छ रु शिव शंभु आदि र अंत का देवता हुन वहाको न कुनै स्वरूप हुन्छ न आकार वहा निराकार हुनुहुन्छ । आदि, अं’त नभएको कारण लिं’ग लाइ शिव का निराकार रूप मानीएको हो तेसैले शिवको साकार रूप मानी भगवान शंकर मानेर शिब लिंग रूप को पूजा गरीयको हो ।केवल शिव लाइनै निराकार लिंग को रूप मा पूजा गरीन्छ । लिंग रूप मा समस्त ब्रह्मांड को पूजा हुन्छ र हिन्दु धर्म अनुसार वहा लाइ समस्त जगत को मालीक मानीदै आएको छ । यसकारण शिव मूर्ति र लिं’ग दुबै रूप मा पूजा गरीन्छ । ‘शिव’ का अर्थ हुन्छ– ‘परम कल्याणकारी’ र ‘लिं’ग’ का अर्थ – ‘सृजन’ पनी हो ।
पौराणिक कथा अनुसार जब समुद्र मंथन को समय सम्पुर्ण देवताहरू अमृत को आ’कांक्षी थीए तर मंथ’नबाटसारा संसार को समाप्त गर्न सक्ने का’लकुट वि’ष आयो र उक्त वि’ष लाइ भगवान शिव ले सहजता पुर्बक आफ्नो कण्ठ मा धारण गरेर ‘नीलकण्ठ’ हुनु भयो र संन्सार लाइ त बचाउनु भयो तर समुद्र मंथन को समय निक्लीयको उक्त वि’ष ग्रहण गरेको कारण भगवान शिव को शरीरमा दा’ह बढ्यो र त्यो दाह लाइ सान्त गर्नको लागी शिवलिं’ग मा जल चढ़ाएउने परंपरा प्रारंभ भएको हो र यो आज सम्म पनी चली रहेको छ ।
The submit शिवलि’ङ्गलाई किन पुजा आजा गरी मान्छन ? यस्ता छन कारण…. appeared first on The Buddha Khabar.
Previous Previous post: देख्ने बितिकै लाख बती बालेको फोटोलाई छोएर सेयर गरौ तपाइले सोचेको काम बन्नेछ, बे-वास्ता नगर्नुहोला, पूरा पढेर ॐ लेखि सेयर गरौं !
Next Next post: तिहार लगत्तै कम्तीमा १५ दिन लकडाउन गर्न चिकित्सकको सुझाव
बजार अनुगमन, अखाद्य वस्तु नष्ट
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय नेपालगन्जले शुक्रबार अनुगमनका क्रममा भेटिएको अखाद्य वस्तु नष्ट गरेको छ । वाणिज्य कार्यालयका अनुसार, कोहलपुर तथा बैजनाथ बजार क्षेत्रका…